Boeny: mitombo an’isa ny mpampianatra sy ny efitrano fianarana | Région Boeny
Mpampianatra FRAM miisa 1219 no hahazo fifanarahana arak’asa, efitrano fianarana miisa 400 no haorina ao amin’ny EPP Cité Tsaramandroso ambany eto Mahajanga.
Ireo no voalazan’ny Talem-Paritry ny Fanabeazam-Pirenena eto Boeny tamin’ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny andron’ny sekoly, ny alarobia 17 febroary 2016 izay natao tao amin’ny Ecole normale Mahabibo Mahajanga.
Ankoatr’ireo dia efitrano fianarana miisa 200 no efa voatsangana tamin’iny taom-pianarana lasa iny teny amin’ny EPP Amborovy Mahajanga.
Fahatanorana, Vatana Salama, Saina mahiratra antoky ny fahombiazana ho amin’ny ho avy. Io no lohahevitra nosafidina hanamarihana ityAndron’ny sekoly 2016 ity. Nosafidiana manokana izany handrisihana ireo ray aman-dreny hampiditra ny zanany any an-tsekoly.
Nanantitrantitra ny maha-laharam-pahamehana izany fampidirana ny ankizy an-tsekoly izany ankilan’izay ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy, izay nisolo-tena ny Lehiben’ny Faritra, raha nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ity lanonana ity.
Lalao ara-panatanjahantena, fanadiovana faobe ny sekoly, fizarana ireo fifanarahana arak’asa ho an’ireo mpampianatra FRAM ao, amin’ny Tranoben’ny Kolontsaina Mahajanga, fambolen-kazo isan-tsekoly, ary hetsika ara-kolotsaina ao amin’ny Ecole normale.
Ireo no hanamarihana ny Andron’ny Sekoly eto Mahajanga izay haharitra telo andro.
Sekoly miankina sy tsy miankina maro eto an-tam-pontanàna, miaraka amin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra no niara-nientana nanamarika ity Andron’ny Sekoly 2016 teto Mahajanga ity.